Man City Kama Bixi Doonta Hooska Man United Xitaa Haddii Ay Seddexda Koob Isku Qaadaan Laakiin Halkaan Arin Ayaa Ka Saari Karta | Laacib.net
Man City Kama Bixi Doonta Hooska Man United Xitaa Haddii Ay Seddexda Koob Isku Qaadaan Laakiin Halkaan Arin Ayaa Ka Saari Karta
Kooxda Pep Guardiola kama bixi doonto hooska deriskooda Manchester United ilaa iyo Manchester City ay ku guuleyato Champions League, sidaasi waxaa aamin khabiirka kubada cagta Ingariiska Robbie Savage oo maqaal ku qoray jariirada Daily Mirror.
Maqaalkiisa ayuu ku yiri: “Waxaa sharad lagu geli karaa in City ay isku qaadi doonto seddexda koob ee horyaalka, League Cup iyo FA Cup oo ay isbuucaan Wembely kula ciyaarayaan Watford. Laakiin kubada qurxoon ee ay ciyaareen iyo dhibcaha badan ee ay uruursadeen labadii xilli ciyaareed ee ugu danbeysay, waxay ogyihiin in koobka weyn ee ay Man United seddexda jeer ku guuleysatay inuu ka baxsaday, waana Champions League.
Seddexdii koob ee ay United isku qaaday horyaalka, FA Cup iyo Champions League sannadii 1999 waana guul weyn oo aan weli la gaari karin ilaa iyo City ay barbareyso ama ay afar koob isku qaado.
“Mustaqbalka dhow, Pep waxa uu final kale ku ciyaarayaa garoonka Wembley berri, City-na ma aysan guuldareysanin final intii uu tababare u ahaa Guardiola.
“Miyay dhici doontaa lama filaankii Liverpool ku dhacay sannadii 1988? Uma maleyno.
“Miyay jiri doontaa ku celiska guushii waqtiga danbe ee ay Wigan ka gaartay City lix sannadood ka hor? Ma arko taas.
“Miyay City isku qaadi doontaa seddexda koob ee maxaliga? Waa taas saadaasheyda. Waxaan saadaalinayaa inay guul raaxo leh oo 2-0 ay ku badinayaan, waxaana ay kubada heysanaa boqolkiiba 70 iyo fursado badan.
“Guardiola ayaa dhiirogelin doona, iyadoo Champions League ay tahay koobka kaliya ee u harsan.
“Waxaa jirta dood ku saabsan in City ay durbaba tahay kooxdii ugu fiicneyd ee ku guuleysata Premier League.
“Labadii xilli ciyaareed ee ugu danbeysay waxa ay ku qaadeen 198 dhibcood, waxay kaliya dhumiyeen 30 dhibcood 76kii kulan ee ugu danbeysay. Liverpool ayaa xilli ciyaareedkan heshay 97 dhibcood, waxaa laga badiyay kaliya hal kulan, welina ma aysan qaadin horyaalka. Waa wax cajiib ah.
“Waxaan qabaa in daawashada kooxdaan ay aad u fiican tahay, qaab ciyaareedkooda waa joogto, waxay ka fiican yihiin kooxdii guuldarro la’aanta ku qaaday horyaalka ee Arsenal ee 2004 iyo kooxdii Arsene Wenger ee labada koob isku qaaday 1998 iyo 2002.
“Dad qaar ayaa aaminsanaa in Pep Guardiola uu waalan yahay haddii uu ku fekeray inuu horyaalka Premier League ku qaadi karo isagoo aan kooxdiisa barin taakalka, waana sida uu qirtay xilli ciyaareedkiisii ugu horeysay ee Etihad.
“Laakiin xaqiiqooyinkii la diiwaangeliyay ayaa dadkaas ka dhigay kuma u muuqda doqomo.
“Xilli ciyaareedkan horyaalka City waxa ay kaalinta koowaad ka gashay dhibcaha, kulamada la badiyay, goolasha la dhaliyay, darbooyinka, baasaska la dhamesytiray, kubad-heysashada, darbooyinkii ugu yaraa ee goolkooda lala eegtay, waxaana ay kaalinta 20aad oo ah tan igu hooseysa ka galeen taakalada ay ku guuleysteen.
Laakiin miyuu Pep hogaamiyaanayaa kooxdii ugu fiicneyd waayaha Premier League iyagoo aan weli ku guuleysanin Champions league? Aniga ahaan waa halka Man United oo xilli ciyaareedkan baaba’ aheyd ay weli uga fiican tahay deriskooda.
“Ilaa iyo City ay ku guuleysan karto koobka ugu weyn ee Champions League, waxa ay weli ka hooseyn doonaan Man United.”